Ọ bụrụ na ị na-eme ụfọdụ ọchụchọ nke na isi saịtị na-akpọsa Twitter si Ikike arụmụka, ị ga-ahụ iyi m mere n'ọtụtụ okwu. Ọ na-akwọ m akụ na onye ọ bụla eme na-ekwu banyere ya - na mmadụ ọbụna gara wuo Ikeji na Ekwo.
Ọbụna naanị ha nwere ndị na-eso ụzọ 1,872, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-eziwanye ikwu ya NY Times Ihe nkiri Twitter, si NY Times Movies peeji nke, nwere ikike karịrị nke m karịa, Chris ma ọ bụ onye ọ bụla ọzọ na nsonaazụ ya. Na NY Times Twitter akaụntụ nwere obere nke ndị na-eso ụzọ.
Tags: ikikechris pirillogoogle peeji nkegoogle pagerank algorithmmoviesọhụrụ york ugborooge ọhụrụ yorkny ugboropeeji nkepeeji nke algorithmichiagbagọOnyinyechukwu